Maitiro ekuchenesa akarukwa majuzi
1. Mugadziri wejuzi anotenda kuti mbatya dzakarukwa dzinofanirwa kusvibiswa guruva uye kunyikwa mumvura inotonhorera kwemaminitsi gumi kusvika makumi maviri vasati vageza. Mushure mekuiburitsa, svina mvura, isa mumushonga wekuwachisa poda kana sipo flake mhinduro uye nyoro kukwesha, uyezve ...
Chenjedzo pakuchenesa dzakarukwa majuzi
1.Vagadziri vejuzi vanoziva kuti dzakarukwa majuzi zviri nyore kuumbika, saka haugone kuidhonza zvine simba kudzivirira chimiro chehembe uye kukanganisa yako yekupfeka kuravira. 2. Mushure mekugeza, juzi rakarukwa rinofanira kuomeswa mumumvuri, rakarembera munzvimbo ine mweya uye yakaoma ...
Kuruka uye dzakarukwa
Vagadziri vejuzi vanoziva kuti musiyano uri pachena pakati pekurukwa nekurukwa ndewekuti: yakarukwa inogadzirwa nekuruka warp uye weft, saka pane nzira mbiri dzekuruka uye weft. Asi kuruka kunoumbwa neshinda inoramba ichitorwa, saka ine imwe degree ...
Kazhinji machira akarukwa
1. Acetate fiber (Acetel) yakarukwa jira Sweater vagadziri acetate fiber ine yakasarudzika zvimiro senge silika, fiber kubwinya uye yakajeka ruvara, rakanakisa drape uye kunzwa. Iyo jira rakarukwa rinogadzirwa naro rine ruoko rwakatsetseka kunzwa, kupfeka kupfeka, hunyoro hwekumwa uye ...
Matanho mashanu ekusarudza ekusarudza zvipfeko zvevana zvakarukwa
Wang: Vagadziri vejuzi vanotenda kuti haugone kungotarisa mutengo paunenge uchitenga mbatya, asi mhando ndiyo kiyi. Kunhuwirira: Dzivisa kutenga mbatya dzine hwema hunopisa; dzivisa kutenga mbatya dzakarapwa ne-anti-kuunyana uye dzakacheneswa kwevana. Mubvunzo: ...
Ndeapi matanho ekushongedza eiyo yakarukwa juzi kugadzira fekitori
Knitwear kugadzira fekitori ndeyekugadzirisa semi-apedza zvigadzirwa uye mbishi zvigadzirwa kuita nguo. Kunyanya zvinoreva kuwedzera kwefrills, muchekechera, mabhatani, pompu, tambo uye zvimwe zvishongedzo pazvipfeko, kana kutora tambo, maruva, kuteterera, uye kukumbira. Shandisa sp ...
Kuchenjerera kunofanirwa kubhadharwa kune yekugadzira nzira yenguo dzakarukwa
1. Mutengesi wejuzi anotenda kuti zvakakosha kuti uyedze shrinkage yemucheka usati wadimbura uye gadziridza iyo patani zvinoenderana nekudzikira. 2. Iyo huru nzira yehembe dzakarukwa ndeyekumusoro overhang, zvinoenderana nehukuru, hupamhi, ruvara uye quali ...
Humwe hunyanzvi mukuenderana kwemavara ezvishongo zvakarukwa
1. Mutsvuku nemuchena, mutema, bhuruu-grey, beige uye grey. 2.Pingi nepepuru, grey, girini yakasviba, chena, beige, shava, navy bhuruu. 3. Orenji tsvuku nechena, nhema uye bhuruu. 4. Yero nepepuru, bhuruu, chena, shava, nhema. 5. brown ine beige, hanzi yero, zvidhinha tsvuku, bhuruu-gree ...
Kwakatangira uye kukura kwembatya dzakarukwa dzevarume
Nguo dzakaonekwa mumatanho ekutanga ekuvandudzwa kwenzanga yevanhu. Vanhu vekare vaigadzira "mbatya" dzisina kugadzirwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavaigona kuwana zvakavakomberedza kuti vazvidzivirire. Hembe dzekutanga dzevanhu dzaigadzirwa nematehwe emhuka, uye yekutanga "jira" ...